Maraakiib Lagu Weeraray Xeebaha U Dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Iiraan (Sawiro) – Xeernews24
Maraakiib Lagu Weeraray Xeebaha U Dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Iiraan (Sawiro)
Markab nuuca saliidda qaada oo laga leeyahay dalka Norway ayaa la sheegay in maanta oo khamiis ah lagu weeraray Gacanka Cuman ee u dhaxeeya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Iran.
War kasoo baxay Hay’adda Ilaalada Badaha ee Norway ayaa lagu sheegay in saddex qarax laga maqlay markabka oo lagu magacaabo Front Altair , waxaana la sheegay in dadkii saarnaa Markabka aysna dhibaato kasoo gaarin.
Hay’addan warka ay soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in Doon nuuca xamuulka qaada ah oo iyana lagu magacaabo Kokuka Courageou lagu weeraray goob aan ka fogeyn halkii lagu weeraray Markabka Front Altair.
Ciidamada badda Iran ayaa soo bad-baadiyey 44 qof oo ah shaqaalaha laba Markab oo saliidda qaada oo dab uu ka kacay kadib dhacdo ku qabsatay gacanka Cuman, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA.
Markabka kale oo ay saarnaayeen 21 shaqaale, ayaa sita calanka dalka Panama, wuxuuna kasoo tagay dalka Sacuudiga una socda Singapore, lama oga ilaa hada waxa sababay dabka ka kacay maraakiibta, balse waxaa loo malaynayaa in la weeraray.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/06/kib-1-634x381.jpg 381 634 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-06-13 18:01:302019-06-13 18:01:30Maraakiib Lagu Weeraray Xeebaha U Dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Iiraan (Sawiro)
Cundhufo, Cadhaytu Iyo Garbaciise? Arday Soomaaliyeed oo ka qalin jabisay Dugsiyada sare ee dalka Sweden iyo xaflad...